Fanatsarana ny rafitra fitsaboana
Ny fivoaran'ny teknolojia manavao sy ny fanatsarana ny rafitra mahazatra dia manolotra fomba nohatsaraina amin'ny fitsaboana rano maloto. Ny sasany amin'ireto paikady fitantanana vaovao ireto dia mikendry ny hampitombo ny fahombiazan'ny fitsaboana, ny fanatsarana ny kalitaon'ny rano mivoaka, na ny fitadiavana tombony amin'ny loharano sarobidy azo avy amin'ny rano maloto.
Fanatsarana ny rafitra septika
Ny fampiasana betsaka ny rafitra septika dia nahatonga ny fivoaran'ny fanovana isan-karazany izay miresaka momba ny filàna fitsaboana tsy manam-paharoa. Ireo dingana fitsaboana fanampiny ireo dia miantoka fa ny rano maloto miditra amin'ny tontolo iainana dia madio kokoa. Satria ireo rafitra ireo dia matetika ampifandraisina amin'ny lava-drano ho loharanon'ny rano fisotro, manatsara ny kalitaon'ny rano fisotro koa izany.
Rafitra Septic Chambre
Ny rafitry ny efi-trano dia fomba iray hafa amin'ny famolavolana vato septic gravel / vato septic, izay mora kokoa ny manamboatra azy. Ny lakandrano dia misy andiana efitrano mihidy voahodidin'ny tany. Ny rano maloto dia mivezivezy amin'ny tanka septika ary avy eo mankany amin'ny efi-trano, izay manampy ny mikraoba amin'ny tany hanala ireo otrikaretina.
Rafitra septic an'ny efitrano. Loharano: US EPA
Ny cluster na ny septic system ao amin'ny vondrom-piarahamonina dia mampitombo ny fahombiazan'ny fitsaboana rano maloto amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny rano maloto amin'ny vondron'olona. Ny trano tsirairay dia samy manana tank septic misy fitsaboana voalohany. Ny effluent dia miaraka ary mikoriana amin'ny lalan-drano iray. Ireo rafitra ireo dia miasa tsara indrindra any ambanivohitra, mitombo ny fiarahamonina misy trano mifanakaiky.
Rafitra septic cluster. Loharano: US EPA
Nutrient mampihena ny rafitra septic
Ny fampihenana ny enta-mavesatry ny otrikaina ao amin'ny rano ao an-toerana dia laharam-pahamehana indrindra rehefa manatsara ny rafitra fitsaboana rano maloto. Ny teknolojia rafitra septika vaovao dia mampitombo ny fahafaha-manala ny otrikaina amin'ny effluent alohan'ny fivoahana. Ireo fanatsarana ny rafitra ireo dia mahazatra kokoa ary matetika no takiana amin'ny toerana sasany izay tena mora tohina amin'ny eutrofication. Ny sivana fasika, toy ny aseho eo amin'ny sary etsy ambany, dia manome fanesorana otrikaina avo lenta. Lafo kokoa noho ny rafitra mahazatra izy ireo nefa afaka manampy amin'ny fanalefahana ny haavon'ny otrikaina ao anaty rano eo akaiky eo.
Rafitra septic sivana fasika. Loharano: US EPA
Fitaovana fitsaboana aerobika
Fitaovana fitsaboana aerobika. Loharano: US EPA
Any amin'ireo toerana misy ekôstômatika anaty rano izay mora tohina amin'ny fandotoana otrikaina, ny sampana fitsaboana aerobika dia manolotra kinova kely amin'ny fitsaboana ampiasaina amin'ny zavamaniry fitsaboana afovoany. Ny fanampiana oksizenina dia mampitombo ny asan'ny bakteria hampihenana ny haavon'ny otrikaina. Ny rafitra sasany dia manana tanky fitsaboana fanampiny miaraka amin'ny dingana famonoana otrikaretina mba hanesorana ireo otrikaretina.
jereo ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaofanadihadiana tranga avy any Long Island, New York mamaritra ny ezaka hanoloana ny rafitra septika taloha amin'ny rafitra mampihena azota amin'ny tanam-bary madiodio izay afaka manakana ny 95% ny azota amin'ny rano maloto tsy hiditra amin'ny rano ary mamela ny rano anaty rano hamerina hody.
Ny fanarenana loharanom-pahalalana dia manondro ny fisamborana sy ny fampiasana ny rano ary ny solida avy amin'ny fako. Ny paikady sasany amin'ny famerenana amin'ny laoniny loharano dia:
Ny famerenana amin'ny laoniny ny loharanon-karena dia mahazo vahana ho vahaolana ho an'ireo rafitra kely sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo toeram-pitsaboana lehibe sy afovoany. Ny tombontsoa azo avy amin'ny paikady fanarenana loharano dia:
Fanesorana ireo otrikaina sy loto manimba ny fahasalaman'ny olombelona sy ny ranomasina.
Mamerina loharano sarobidy avy amin'ny fako.
Azo ampiharina ho rafitra fanadiovana izay tsy nisy na nanatsarana / nanoloana rafitra fitsaboana efa nilaozan'ny toetr'andro.
Any Haiti, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana SOIL (Fiainana maharitra iaraha-miaina voajanahary) dia mampihatra teknolojia fanarenana loharanom-pahalalana hanomezana fahadiovana miorina amin'ny kaontenera. Ity rafitra ity dia manome trano fidiovana ho an'ireo tsy misy fidirana ary manome vahaolana amin'ny fandotoana sy ny fikajiana. Mampivily ny rano ny trano fidiovana ary manavaka ny fako mivaingana hanangonana isan-kerinandro.
Fanoharana momba ny fizotran'ny fanadiovana sy loharanom-pahalalana miorina amin'ny SOIL. Loharano: SOIL
Ny SOIL dia manangona sy mamindra ny fako any amin'ny toeram-pitrandrahana zana-kazo iray izay itondrana azy ireo fenitra nofaritan'ny World Health Organization. Ny zezika vita dia amidy amin'ny tantsaha mba hampitombo ny vokatra ary hampihena ny fikaohon-tany.
Ny tsara indrindra, ny famerenana amin'ny laoniny ny loharano dia miteraka sanda avy amin'ny fako amin'ny alàlan'ny rafitra loop iray mihidy tanteraka, toa ny ohatra nomen'ny Janicki Omni Processor. Ny Omni Processor dia mandray ny fako sy ny fako ary hamadika izany ho herinaratra sy rano fisotro madio. Izy io dia miasa toy ny ozinina etona, insinerator ary rafitra fanivanana rano mitambatra ho iray. Na dia mbola prototype aza any Dakar, Senegal, ny rafitra dia mampiseho ny fahafaha-miakatra ny vidiny mifandraika amin'ny hetsika (satria mamokatra angovo ho azy manokana) sy ny fampidirana loharanon-karena voajanahary (satria afaka ny loto sy ny fako). Mahafantatra ny vidiny lafo voalohany hananganana ity rafitra ity, ny Omni Processor dia mpisolo toerana ho an'ireo zavamaniry fitsaboana rano maloto be manompo tanàna erak'izao tontolo izao.
Janicki Omni Processor. Loharano: Janicki Bioenergy
Ny fizotran'ny fitsaboana voajanahary dia mampiasa zavamaniry sy mikraoba handravana, handraoka, hamandrihana ary / na fandotoana oxygenate amin'ny rano maloto rehefa mivezivezy manerana ny tontolo iainana. Ireo fizotran'ny natiora ireo dia misambotra sy manivana ny rano maloto sy ny rano ambanin'ny tany, ao anatin'izany ny rano maloto avy amin'ny orana, alohan'ny hamoahana azy any amin'ny ranomasina.
Vahaolana miorina amin'ny natiora ampidiro ny faritra mando, ny bioswales, ny arina arina, ny dobo fipetrahana, ny faritra buffer riparian, sns. Ny mpitsikera ny vahaolana voajanahary dia milaza fa mety tsy manome fitsaboana sahaza sy manala ny otrikaretina izy. Na izany aza, paikady mahomby hanamafisana ny fanesorana ny pathogen dia ny fiantohana fa ny rafitra dia manome fifandraisana bebe kokoa amin'ny oksizena sy mikraoba amin'ny alàlan'ny fampihenana ny taham-pivoarana sy ny fampifangaroana ireo vahaolana mifototra amin'ny natiora miaraka amin'ireo dingana fitsaboana fanampiny avy amin'ny rafitra afovoany na ivom-bahoaka. Ireo paikady ireo dia manana tombony fanampiny amin'ny fanomezana toeram-ponenana hanohanana ny tontolo biodiversité, hanohanana ny fialamboly (ao anatin'izany ny jono sy ny fizahan-tany), ary ny tombony estetika amin'ny teknolojia fitsaboana hafa.
Jereo ireto ohatra roa ireto raha hijery akaiky kokoa ny fizotran'ny fitsaboana voajanahary:
Fotodrafitrasa maintso no nampiasaina hanomezana fitsaboana fanampiny ny famoahana ny tank septic, manatsara ny fanesorana ny loto ary mampihena be ny habetsahan'ny rano maloto miditra Guánica Bay, Porto Rico.
Ny biolozy (arina vokarina avy amin'ny zavamananaina) sy ny ahitra vetiver dia nampiasaina mba hifehezana ny fikaohon-tany sy hanalana ny otrikaina ao Samoa Amerikanina.
Ny tsy fitovian'ny lalàna, ao anatin'ny vondrom-piarahamonina, tanàna, fanjakana ary firenena, dia miteraka fanamby sarotra ho an'ny fitantanana ny rano maloto. Ny fanaraha-maso tsy tapaka sy ny fametrahana ny tokonam-baravarana eo an-toerana ho an'ny loto entin'ny rano maloto dia tokony hampiharina mba hamantarana rehefa mitranga ny fandotoana. Miaraka amin'ny tokonam-baravarana voafaritra, ny vondrom-piarahamonina dia afaka mamaritra tsara kokoa ny fotoana tokony handraisana valiny manokana, toy ny fanakatonana ny tora-pasika ho an'ny fialamboly na ny famoahana toro-hevitra momba ny rano mangotraka. Ny ankabeazan'ny fenitry ny fitsaboana sy/na ny fitsipika momba ny fivoahana dia avy amin'ny faritra mafana, saingy ireo fenitra ireo dia azo ampiasaina ho modely amin'ny fametrahana fenitra momba ny fanaraha-maso sy ny fitsabahana hatao any amin'ny faritra mafana. Na dia mety ho ivelan'ny faritry ny asan'ny mpitantana an-dranomasina aza ny fitsipika, ny fitaovana novolavolaina ho anisan'ny fitsipika any amin'ny firenena hafa dia mety hanampy amin'ny fitarihana ny drafitra fanaraha-maso sy ny tokonam-baravarana hiatrehana ny fandotoana ny rano maloto. Jereo ny pejy 22-28 amin'ny Torolàlana ho an'ny mpitsabo iray amin'ny fandotoana rano maloto amin'ny ranomasina hianarana bebe kokoa momba ny rafitra efa misy eo amin'ny faritra sy ny firenena, ary koa ny sokajy samihafa handinihana ireo fitsipika sy kaody mifandraika amin'izany.
Fitaovana maromaro no nampiharin'ny US Environmental Protection Agency (EPA) mba hametrahana ny tokonam-baravaran'ny loto ho an'ny vatan-drano sy ny zavamananaina anaty rano. Ny fitaovan'ny tokonam-baravarana mahazatra dia ny totalin'ny enta-mavesatra isan'andro, na TMDL, izay mametra ny habetsahan'ny loto manokana avela hiditra ao anaty rano. Izany dia mahomby indrindra ho an'ny fandotoana rano maloto izay azo avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra. Ny TMDL dia miahiahy momba ny habetsahan'ny loto miditra amin'ny rano fa tsy ny loharano. Ny vitsivitsy amin'ireo misokatra amin'ny varavarankely vaovaofitaovana EPA fanampiny ampidiro ny angon-drakitra momba ny otrikaina ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNPDAT), programa fanaingoana kalitaon'ny rano ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaofanenitra), ary fitaovana diagnostika ho an'ny fahasembanana biolojika ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCADDIS).
Gradient toe-javatra biolojika
Fitaovana manara-maso vao misondrotra avy amin'ny US Coral Reef Task Force ny Biological Condition Gradient (BCG), izay mifototra amin'ny fepetra momba ny kalitaon'ny rano manokana ho an'ny tontolo manodidina ny haran-dranomasina. Ny BCG dia novolavolaina tany am-boalohany ho rafitra ampiasaina handikana ny vokatry ny adin-tsaina samihafa amin'ny tontolo iainana ranomamy. Miaraka amin'ny tari-dalana vaovao manokana momba ny tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina, ny BCG dia afaka manampy ny mpitantana hametraka ny fizotry ny adin-tsaina amin'ny alalan'ireo karazana mifandraika amin'ny faritra misy azy: haran-dranomasina, sponjy, trondro, ahidrano, na zavamaniry. Ity gradient ity dia tokony hamaritra ny valin'ny biolojika rehefa mitombo ny adin-tsaina avy amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny henjana. Ny ambaratonga voalohany dia maneho ny toetry ny teratany, ary tokony hamaritra ny mponina ao anatin'ny toe-javatra mahazatra. Ho an'ny haran-dranomasina, mety ho tafiditra ao anatin'izany ny tahan'ny karazana fantatra fa mora voan'ny adin-tsaina raha oharina amin'ireo izay mandefitra kokoa. Rehefa mitombo ny gradient adin-tsaina dia mety hiova io fifandanjana io. Ny fitaovana, miaraka amin'ny ohatra avy amin'ny tetik'asa fikarohana, dia afaka manampy ny mpitantana hamaritra tsipika fototra ary manangona angona momba ny loto sy ny tontolo iainana rehefa mandeha ny fotoana. Ity fampahalalana ity dia azo ampiasaina hamantarana ny fiantraikan'ny fandotoana amin'ny tontolo iainana sy haminavina ny fiantraikan'ny fandotoana amin'ny hoavy na ny fiparitahana maharitra amin'ny rafitry ny haran-dranomasina.
Paikady nasionalin'ny fitantanana ny kalitaon'ny rano any Aostralia
Gold Coast, Aostralia. Sary © Marian Frew/TNC Photo Contest 2019
Fitsipika iray hafa azo ampiasaina ho fanondroana rehefa mamolavola fitsipika na tokonam-baravarana dia misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPaikady nasionalin'ny fitantanana ny kalitaon'ny rano any Aostralia. Ity paikady ity dia novolavolaina mba hialana amin'ny fandotoana ny vatan-drano rehefa mamoaka rano ny toeram-pitsaboana. Na dia napetraka eo an-toerana aza ny fenitry ny fitsaboana ny rano maloto ariana any amoron-tsiraka, ireo torolalana nasionaly ireo dia mamporisika ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano amin'ny dingana maro mandritra ny fikarakarana mba hanamarinana fa manala ireo loto ireo. Ny antontan-taratasy dia mamaritra ny vatan-drano izay saro-pady indrindra amin'ny loto noho ny tahan'ny fandotoana miadana kokoa, toy ny helodrano sy ny estuary, izay mitaky fitsaboana faharoa (farafaharatsiny) ary matetika fanalana otrikaina fanampiny mba hiarovana ny tontolo iainana.
Tahirim-bolan'ny National Outfall Database
Sarintanin'ny National Outfall Database any Aostralia
Mba hanampiana ny fanaraha-maso sy ny fitantanana, ny National Outfall Database dia manao sarintany ny habetsaky ny fivoahana mankany amin'ny fivoahana manerana an'i Aostralia ary mitatitra momba ny mponina karakaraina, ny karazana fitsaboana ary ny haavon'ny loto isan-karazany. Ny paikadin'ny fitantanana ny rano maloto any Aostralia dia mihamitombo hatrany amin'ny fiarovana an-dranomasina, nasehon'ny  misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanavaozana ny zavamaniry fanadiovana rano maloto ny rano madio any Cairnsmanokatra fisie PDF .
Ity tahirin-kevitra ity dia mitatitra ny salan'isa isam-bolana amin'ny loto isan-karazany ao anatin'izany ny pH, ny solids levona tanteraka, ny azota, ny phosphore ary ny E. coli. Ny mpitantana dia afaka mahita izay toerana refesina manerana an'i Aostralia ary inona ny sanda ara-dalàna amin'ny toerana tsirairay.
Fikambanan'ny rano maloto
Ny fikambanan'ny faritra dia mpiara-miombon'antoka lehibe hampifandray ireo mpitantana amin'ny mpandrindra sy ny fitaovana. Fikambanana toy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanan'ny rano sy rano maloto any Karaiba, ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanan'ny rano sy rano maloto Pasifika, ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanan'ny rano sy fako Pasifika dia loharanon-karena sarobidy ho an'ny mpitantana mitady hivezivezy amin'ny fepetra takian'ny lalàna mihatra amin'izy ireo sy miditra amin'ny angona, fitaovana ary loharano hafa.